Ubhontshisi obanzi eCatalan | Ukupheka Kwekhishi
Loreto | | Ukudla kwendabuko, Okufakiwe Okushisayo, General, Izitishi Namasobho Ungadliwa, Ungadliwa Kwemifino, Ukupheka Okukhethekile
I-Las ubhontshisi obanzi zingenye yaleyo mifino kwesinye isikhathi siyadelela ngoba sikholelwa ukuthi zizohlala zisenza noma sizizwe kabi njalo, ngoba ukugaya ukudla kuyinkimbinkimbi ngesikhumba sayo esinzima. Okungaziwa ngabantu abaningi ukuthi kukhona uhlobo olusisiza ukuthi sigaye ubhontshisi we-fava. Futhi ukwazi lesi sithako iyiphi indlela engcono kunokulungiselela ezinye Ubhontshisi waseCatalonia obanzi.
Siqala ngokuhlola izithako zokuzenza. Futhi omunye umnikelo.
Izinga lobunzima: izindlela
1 ikhilo kabhontshisi wengane eqandisiwe
I-chorizo ​​esikiwe ukunambitha
Isoseji emnyama ukunambitha
Ubambo lwengulube ukunambitha
I-mint entsha (ingaba eyomile uma kwenzeka singakwazi ukuthola okusha)
Utamatisi ophelele o-3, uhlutshiwe
Usawoti, uwoyela nopelepele
Lapho sesenze uhlu lwethu lokuthenga, siqala ngokubeka ifayela le- izingcezu ze-chorizo, isoseji emnyama nobambo, ngamafutha amancane. Ngenkathi silungisa usoso ngotamatisi ophekiwe wonke okheniwe, i-alimondi, i-garlic clove no-anyanisi. Sikusebenzise konke nge-mini kuqala futhi manje Singayifaka ku-casserole ngezingcezu ze-chorizo, isoseji nezimbambo.
Sivumela konke kugcwale kancane futhi sifaka ubhontshisi osamisiwe, sihlanganisa yonke into ukuze ama-flavour ahlangane bese sengeza amanzi.
Manje siyakuvumela ukhula isikhathi esihle, kodwa okokuqala sifaka isithako esizosenza sizigaye kangcono, i-mint. Siyafafaza i-casserole bese uyiyeka yotshani isikhashana ize iqede. Njengethiphu, ngingakutshela ukuthi uma ungazishiya zenziwe kusengaphambili, lapho sekuyisikhathi sokuzidla zizonambitha kangcono.
Uma uzizama ngeminti futhi zikufanela, silindele ukuphawula kwakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » I-Recetas del Mundo » Ukudla kwendabuko » Ubhontshisi obanzi waseCatalonia